कोरोना सङ्क्रमण: यी हुन् नेपालमा कोरोना संक्रमित १४ जना (सूची सहित) – kalikadainik.com
कोरोना सङ्क्रमण: यी हुन् नेपालमा कोरोना संक्रमित १४ जना (सूची सहित)
मंगलबार, बैशाख ०२, २०७७ | १०:४४:२९ |
चितवन । विश्व महामारी बनेको कोरोना भाइरसका थप संक्रमित पहिचान भएपछि सजगता अपनाइएको छ ।
२०७७ को पहिलो दिनमै दुईजना संक्रमित भेटिएका छन् । उनीहरु क्वारेन्टाइनमा थिए । पछिल्लो तथ्यांक अनुसार संक्रमित सबैभन्दा बढी कैलालीमा भेटिएका छन् । त्यसपछि पर्सा, काठमाडौं र बाग्लुङमा भेटिएका छन् । नयाँ संक्रमित थपिएसँगै नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या १४ पुगेको छ । आज स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले नयाँ दुईजना संक्रमित भेटिएको खुलाएका हुन् ।
संक्रमित देशभित्र भेटिएका १३ औं र १४ औं संक्रमित हुन् । उनीहरुमध्ये एकजना रौतहटका १९ वर्षीय युवक हुन् । क्वारेन्टाइनमा रहेको अवस्थामा उनको नमूना परीक्षण गर्दा पोजेटिभ भेटिएको डा. देवकोटाले जानकारी दिए । उनलाई क्वारेन्टाइनबाट निकालेर अस्पताल लगिएको छ ।
यसैगरी, कैलालीकी ६५ वर्षीया महिलामा कोरोना संक्रमण भेटिएको छ । लम्किचुआ नगरपालिकाको क्वारेन्टाइनमा रहेकी उनको नमूना परीक्षणबाट पोजेटिभ देखिएको थियो ।
हिजो एकै दिन तीन नयाँ संक्रमित भेटिएका हुन् । तीनैजना भारतीय नागरिक हुन् । वीरगञ्जमा भेटिएका उनीहरु मुस्लिम धर्मगुरु भएको बुझिएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार उनीहरु छपकैया स्थित मस्जिदमा बस्दै आएका थिए र शंका लागी नारायणी अस्पताल वीरगंजमा आइशोलेशनमा राखिएका थिए । त्यही उनीहरुको थ्रोट स्वाब परीक्षण गरिएको थियो ।
यसअघि कोरोना संक्रमित नौ जनामध्ये आठजना विदेशबाट फर्केकाहरु हुन् । उनीहरु युरोप, खाडी मुलुक, चीन र भारतबाट फर्केकाहरु रहेका छन् । बाँकी एकजनालाई नेपालभित्र रहेका संक्रमितबाट सरेको हो । पछिल्लो पटक संक्रमित भेटिएका भारतीय नागरिकहरु दिल्लीबाट नेपाल आइपुगेका थिए । उनीहरु केही हप्ताअघि नेपाल प्रवेश गरेको बुझिएको छ ।
संक्रमितहरु दिल्लीस्थित निजामुद्दीनको तबलिग जमात धार्मिक समुदायसँग सम्बन्धित हुन् । उनीहरुको सम्पर्कमा रहेकाहरुलाई पनि नियन्त्रणमा लिइएको पुष्टि भएको छ । सबैलाई आइशोलेशनमा राखेर स्वाब परीक्षण गरिने बताइएको छ ।
१३ औं संक्रमित रौतहटका १९ वर्षीय युवक हुन् । क्वारेन्टाइनमा रहेको अवस्थामा उनको नमूना परीक्षण गर्दा पोजेटिभ भेटिएको थियो ।
१४ औं संक्रमित कैलालीकी ६५ वर्षीया महिला हुन् । लम्किचुआ नगरपालिकाको क्वारेन्टाइनमा राखिएकी उनमा संक्रमण भेटिएपछि सेती अस्पताल लगिएकी छिन् ।
१. चीनबाट फर्केका युवकको ९ माघमा संक्रमण पत्ता लागेको थियो